ယတြာနဲ့ အလုပ် ကွာခြားပုံကို ဘုန်းဘုန်း ဒဲ့မိန့်လိုက်ပြီ - Zet Star
ယတြာနဲ့ အလုပ် ကွာခြားပုံကို ဘုန်းဘုန်း ဒဲ့မိန့်လိုက်ပြီ
ဒေါက်ဖိနပ်က စစ်ဖိနပ်ထက်စွမ်းတာ ဘာကြောင့်လဲ?တဲ့။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး
ဗေဒင် ယတြာ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ တခြားဘာသာ၀င် တွေကို မပြောပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံထားသူတွေကို ပဲ ပြောပါတယ်။
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဗေဒင်ယတြာ မရှိဘူးဗျ။ ကံနဲ့ ကံရဲ့အကျိုးပဲ ရှိတယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာ ဖြစ်မယ်။ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာ ဖြစ်မယ်။ မကောင်းတာလုပ်ပီး ကောင်းတာဖြစ်ချင်လို့ ယတြာချေ လို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ မိန့်တော်မူချက်ပါပဲ။
ပန်ထွာဘုရင်မ နတ်နန်းထဲ၀င်တိုင်းသာ ဒွတ်ဒဘောင်မင်း ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီနတ်နန်းပေါ်မှာ အသိုက်လုပ်ပီး နေနေ တဲ့ ခိုတွေ စာတွေ အကုန်လုံး ဒွတ်ဒဘောင်မင်း ဖြစ်ကုန်မှာ ပေါ့။ အဲဒီနယ်ကလူတွေလည်း နှစ်စဉ်ပွဲတက်နေကြတာမို့ အကုန် ဒွတ်ဒဘောင်မင်းတွေ ဖြစ်ကုန်မှာ သေချာတယ်။
ရွှေဘိုက အလောင်းဘုရားရဲ့ မြေကိုသွားပီး နင်းတိုင်းသာ အလောင်းဘုရားလို အောင်မြင်ကြစတမ်းဆို ထိုင်းမှာ ပန်း ရံလုပ်နေကြတဲ့ ရွှေဘိုသားတွေ ဘန်ကောက်မြို့က မြစိမ်း ရောင် နန်းတော်ကြီးကို ဝါးရင်းတုတ်နဲ့ စီးပစ်လိုက်တာ ကြာပါပီ။
ဒီလိုသာ မြေကိုနင်းရုံနဲ့ ဇာတိ ပ၀တ္တိထူးသူ အလိုလို ဖြစ်ကြစတမ်းဆို ကျုပ်တို့တတွေ ပရိယတ်စာပေတွေ သင်မနေတော့ဘူး။ ဝိပဿနာတွေ အားထုတ်မနေတော့ ဘူး။ ပိုက်ဆံ သိန်း၂၀လောက်အကုန်ခံပီး အိန္ဒိယသွား မဟာဗောဓိအောင်မြေကြီး နင်းချလိုက်မယ်။ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ကြီး အလိုလိုရလာပီး ပိဋကတ်သုံးပုံးလည်း အလိုလို တတ်ပီးသားဖြစ်။ ကိလေသာတွေလည်း အကုန် စင်ကြယ်ပီး ဘာတရားမှအားမထုတ်ရပဲ နိဗ္ဗာန်ကို အလိုလို မျက်မှောက်ပြုပီးသား ဖြစ်သွားအောင်လေ။ ဒီလိုရကြ စတမ်းဆိုရင် ပြောပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သကြားမင်းက သူ့ရဲ့သားတော် သုသိမကို ပြောတဲ့စကားလေး အမှတ်ရတယ်ဗျ။ အဲဒီ သုသိမ ဆိုတဲ့ အကောင်က အပိုးကမကျိုးဘူး။ ပျင်းကပျင်း ဖျင်းကဖျင်း ဒီအထဲ ဖအေ သိကြားအရှိန်ယူ စိန်နားကပ်နဲ့ ပါးပြောင် ပီး ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်လုပ်နေလိုက်သေးဆိုတော့ ဖအေသိကြား မနေသာတော့ဘဲဆုံးမရတော့တာပေါ့ဗျာ။
ဒီမယ် ငါ့သားသုသိမ ငါသာ မင်းလိုပျင်းခဲ့ဖျင်းခဲ့ရင် သိကြားမင်းလည်းမဖြစ်ဘူး မင့်အမေလည်း ငါနဲ့မရဘူး သေချာတယ်တဲ့။ ငါ့မှာ သိကြားမင်းဖြစ်နေတာတောင် မင်း အမေကိုလိုချင်လို့ တစ်နှစ်တစ်ခါ အသူရာတွေနဲ့ စစ်တိုက် ခဲ့ရသေးတယ် ။ ဒီတော့ မင့်ကိုငါမေးမယ်
မတိုက်မခိုက်ရပဲနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စစ်မြေပြင်ဆိုတာ ရှိသလား?။ မသင်ကြားရပဲနဲ့ တတ်မြောက်တဲ့ ပညာဆို တာရော ရှိသလား?။ အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့ ထမင်းစားရတဲ့ နေရာဆိုတာရော ရှိသလား? ရှိရင်ပြောပြပါ။ အဲဒီနေရာ တွေကို ငါ သွားနေကြည့်ချင်လို့ တဲ့။
ပြောချင်တာက ယတြာချေလို့သာ ရကြေးဆို သိကြားမင်း ဒီစကားပြောနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ယတြာချေမှာ သေချာပါ တယ်။ တကယ်တော့ ဘ၀တစ်ခု အောင်မြင်မှုရဘို့ အဓိက သော့ချက်က ယတြာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကောင်းမြတ်မှန်ကန် တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ချင်ရင် ကောင်းတဲ့ စကားပြော ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်။ ကောင်းတဲ့အတွေး တွေးမှ ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုကို ရမှာပါ။
ကောင်းတာတစ်ကွက်မှ မရှိခဲ့ပဲ ကောင်းတာလိုချင်လို့ ယတြာချေနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်ကနေ ပြောရရင် No ပါပဲ။
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်လေရာ နိုင်ငံတိုင်း မှာ ကော်ဇော်နီတွေခင်းပီး သမ္မတတွေကိုယ်တိုင်ကြို စစ်ဦးစီးချုပ်တွေကိုယ်တိုင်က အလေးပြုနေရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ သူမရဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ် ကောင်းတဲ့အပြော ကောင်းတဲ့အတွေး တွေကြောင့်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သေနတ်ချပေးရင် မောင်းတင် ချင်မှ တင်တတ်မယ်။ စစ်ဖိနပ်ချပေးရင် ကြိုးတပ်ချင်မှ တပ်တတ်မယ်။ စစ်မြေပြင်မှာ ကျားထိုးတာတွေ စစ်ဦး ချိုးတာတွေ လုပ်ချင်မှ လုပ်တတ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သံခင်း တမန်ခင်း စစ်ပွဲမှာတော့ ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလည်း ရင် ဘောင်တန်းနိုင်တယ်။ ဗလာဒီမာပူတင်နဲ့လည်း လက်ရုံး နှစ်လုံးရည် စမ်းနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကမ္ဘာကျော်အဲဒီ နိုင်ငံတွေက စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် အလေးပြု ကြရတာပေါ့။
အဲဒါပြောတာ ဒေါက်ဖိနပ်က စစ်ဖိနပ်ထက် ပိုစွမ်းတယ်လို့ ဘာကြောင့်လဲ သိလား?။ အလုပ်ဗျ။ အလုပ် ။ အလုပ်။ ဘာအလုပ်လဲ?မေးရင် ကောင်းတဲ့ အလုပ် ။
← မိဘကို ခွေးနဲ့ နှိုင်းလို့ ကိုယ်တိုင် ခွေးဖြစ်သွားတဲ့ လပွတ္တာက မခင်လှ အကြောင်း
ပရိသတ်တွေကို ကတိ အကြီးကြီး တခု ပေးလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး →